फाइब्रोमायाल्जिया - पीडा राहत - पृष्ठ १० को १०
श्रेणीका लागि अभिलेख: फिब्रोमायाल्जिया
Fibromyalgia मा लेख
फाइब्रोमाइल्जिया एक लामो दुखाइ सिन्ड्रोम हो जुन प्राय: बिभिन्न लक्षण र क्लिनिकल संकेतहरूको संख्या प्रदान गर्दछ। यहाँ तपाईं विभिन्न लेखहरूको बारेमा हामीले पढ्न सक्नुहुनेछ जुन हामीले क्रॉनिक पेन डिसआर्डर फाइब्रोमाइल्जियाको बारेमा लेख्दछौं - र यस रोगको निदानको लागि कस्तो प्रकारको उपचार र आत्म-उपायहरू उपलब्ध छन् भन्ने कुराको बारेमा भने होइन।
फाइब्रोमायाल्जिया नरम टिश्यु गठिया को रूपमा पनि चिनिन्छ। सर्तले मांसपेशीहरू र जोर्नीहरूमा लामो समयसम्म पीडा, थकान र डिप्रेशन जस्ता लक्षणहरू समावेश गर्न सक्दछ।
18 / 02 / 2020 /0 टिप्पणीहरू/i Fibromyalgia/av भोंड्ट
फाइब्रोमायाल्जिया र ग्लूटेन
फाइब्रोमाइल्जियाका धेरै व्यक्तिहरू याद गर्छन् कि उनीहरू ग्लुटनमा प्रतिक्रिया दिन्छन्। अरू चीजहरूको माझमा धेरैलाई लाग्छ कि ग्लुटनले गर्दा बढ्दो दुखाइ र लक्षणहरू निम्त्याउँछन्। यहाँ हामी किन हेर्छौं।
के तपाईंले नराम्रो महसुस गर्नुभयो जस्तो लाग्यो यदि तपाईंले अति ग्लूटेन-रोटी र रोटी पाउनुभयो भने? त्यसोभए तिमी एक्लो छैनौ!
वास्तवमा, धेरै अनुसन्धान अध्ययनहरू (1) जहाँसम्म निष्कर्ष निकाल्ने कि ग्लुटन संवेदनशीलता फाइब्रोमाइल्जियामा योगदान पुर्‍याउने कारक हो। त्यस्ता अनुसन्धानको आधारमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईलाई फाइब्रोमायाल्जिया छ भने ग्लुटन काट्न प्रयास गर्दछन्। यस लेखमा तपाई फाइब्रोमाइल्जिया भएकालाई ग्लुटनले कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने बारे अझ बढी जान्न सक्नुहुन्छ - र यो सायद केस हो जुन धेरैजसो जानकारीले तपाईंलाई चकित पार्नेछ.
ग्लुटनले फाइब्रोमायालियालाई कसरी असर गर्छ?
ग्लुटन एक प्रोटिन हो जुन हामी गहुँ, जौ र राईमा पाउँछौं। ग्लुटेन मा गुणहरु छन् कि हर्मोन सक्रिय भोक लाग्ने संग जोडिएको छ, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ धेरै खानुहुन्छ र तपाइँ एक "मीठो तृष्णा" छिटो ऊर्जा को स्रोतहरु माथि (धेरै चिनी र बोसो संग उत्पादनहरु) को विकास।
जब ग्लुटन ग्लुटेन संवेदनशील व्यक्ति द्वारा सेवन गरिन्छ, यसले उनीहरूको पक्षमा अत्यधिक प्रतिक्रियाको कारण गर्दछ, जसले फलस्वरूप सानो आंतमा भड़काउने प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छ। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पोषक तत्वहरू शरीरमा अवशोषित हुन्छन्, त्यसैले यस क्षेत्रको संपर्कले जलन र पोषक तत्वहरूको कम शोषण निम्त्याउँछ। जसले फलस्वरूप कम उर्जा निम्त्याउँछ, पेट सुगन्धित छ भन्ने भावनाको साथै उत्तेजित आन्द्राको लागि।
राम्रो मल त्याग स्वास्थ्य को लागी ठोस सल्लाह:
"रुमेटिज्म एन्ड क्रोनिक पेन" समूहमा हाम्रा १ 29500०० भन्दा धेरै सदस्यहरूले केही प्राकृतिक पूरकहरूको प्रभाव रिपोर्ट गर्छन्। संग अनुदान प्रयास गर्नुहोस् probiotics (राम्रो पेट ब्याक्टेरिया) वा Lectinect पेट। धेरैका लागि यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्दछ, र हामी जान्दछौं कि आन्तरी स्वास्थ्य तपाईं कसरी राम्रोसँग महसुस गर्नुहुन्छ भनेर महत्त्वपूर्ण छ - दुबै ऊर्जाको सन्दर्भमा, तर मुड पनि।
सानो आन्द्रा पर्खालमा चुहावट
धेरै शोधकर्ताहरूले "आन्द्रामा चुहावट" लाई पनि उल्लेख गर्छन्।2), जहाँ तिनीहरू वर्णन गर्छन् कि कसरी सानो आन्द्रामा भडकाउने प्रतिक्रियाहरूले भित्री पर्खाललाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। तिनीहरू यो पनि विश्वास गर्छन् कि यसले केही खाद्यान्न कणहरू बिग्रिएको भित्ताहरूमा भत्काउन सक्छ, जसले गर्दा यसले बढी ऑटोम्यून प्रतिक्रिया दिन्छ। स्वत: प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको मतलब शरीरको आफ्नै प्रतिरक्षा प्रणालीले शरीरको कोशिकाको केही भागहरूमा आक्रमण गर्दछ। कुन स्वाभाविक रूपमा विशेष गरी भाग्यशाली छैन। यसले शरीरमा भड़काऊ प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छ - र यसरी फाइब्रोमाइल्जिया दुखाइ र लक्षणहरू बढाउँछन्।
आंत्र प्रणालीको सूजन को लक्षण
यहाँ केहि सामान्य लक्षणहरु छन् जुन प्राय: जसो शरीरको जलनले अनुभव गर्न सकिन्छ।
चिन्ता र निद्रा समस्याहरू
अपच (एसिड भाटा, कब्ज र / वा पखाला सहित)
संज्ञानात्मक विकार (समावेश) तंतुमय धुंध)
सम्पूर्ण शरीरमा दुखाइ
थकान र थकान
आदर्श वजन राख्नमा कठिनाई
क्यान्डिडा र फंगल संक्रमणको घटना बढ्यो
के तपाइँ यससँग सम्बन्धित रातो धागो देख्नुहुन्छ? शरीरले शरीरमा सूजन कम गर्न महत्त्वपूर्ण मात्रामा उर्जा प्रयोग गर्दछ - र ग्लुटनले भडकाउने प्रतिक्रियाहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ (ग्लुटन संवेदनशीलता र सेलिआक रोगको साथमा)। शरीर मा सूजन कम गरेर, एक धेरै व्यक्तिमा, लक्षण र पीडा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
विरोधी भडकाउने उपायहरू
स्वाभाविक रूपमा, तपाईको खाना परिवर्तन गर्दा क्रमिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण छ। कसैले पनि आशा गर्दैन कि तपाइँले दिनमा सबै ग्लुटन र चिनी काट्नु भयो, बरु तपाईले बिस्तारै तल झर्ने कोशिस गर्नुभयो। कार्यान्वयन गर्न कोसिस गर्नुहोस् probiotics (राम्रो पेट ब्याक्टेरियाहरू) तपाईको दैनिक खानामा।
तपाईले कम इन्फ्लेमेટરી रिएक्शन र कम लक्षणको रूपमा पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर यसले समय लिनेछ - दुर्भाग्यवस त्यहाँ यस बारे कुनै श doubt्का छैन। त्यसोभए यहाँ तपाइँले परिवर्तन गर्न वास्तवमै आफूलाई समर्पण गर्नुपर्दछ, र यो त्यस्तो चीज हो जुन फिब्रोमायाल्जियाको कारणले गर्दा पूरै शरीरमा दुखाइन्छ। धेरै मानिसहरु लाई लाग्छ कि तिनीहरुसंग पैसा छैन।
यसैले म तपाईलाई यो कदम कदम पछि जान भन्छु। जस्तै। यदि तपाईं हप्तामा धेरै पटक केक वा क्यान्डी खान्नुहुन्छ भने, पहिलो स्थानमा केवल सप्ताहन्तहरूमा काट्ने प्रयास गर्नुहोस्। लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् र लिनुहोस्, शाब्दिक रूपमा, अलि-अलि गर्दै। किन मा प्रवेश द्वारा शुरू छैन fibromyalgia आहार?
के तपाईंलाई थाहा छ अनुकूलित व्यायाम विरोधी भड़काउने हो? यसैले हामीले दुबै गतिशीलता र सामर्थ्य कार्यक्रमहरू विकास गरेका छौं हाम्रो युट्यूब च्यानल फाइब्रोमाइल्जिया र संधिशोथ भएकाहरूका लागि। तपाइँले सदस्यता लिनुभयो कि (यसका लागि नि: शुल्क) - र हामी तपाईंलाई सम्झना गराउँदछ कि भविष्यमा त्यहाँ धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू हुनेछन् भन्नेमा हामी एउटा ठूलो मूल्य सेट गर्छौं।
आन्दोलन व्यायाम जस्तै विरोधी भड़काउने
अनुसन्धानले देखाएको छ कि व्यायाम र व्यायामले जीर्ण सूजनको बिरूद्ध विरोधी भडकाउने प्रभावहरू (3). हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नियमित व्यायाम तालिकाहरू प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो हुन्छ जब तपाईंसँग फाइब्रोमाइल्जिया हुन्छ चम्कने बस्तु-अप र नराम्रो दिनहरू।
यसकारण हामीसँग, आफ्नै माध्यमबाट Chiropractor अलेक्ज्याण्डर Andorff, एक प्रोग्राम सिर्जना गर्नुभयो जुन रूमेटिक्स माथि कोमल र अनुकूलित छ। यहाँ तपाईं पाँच अभ्यासहरू देख्नुहुन्छ जुन दैनिक गर्न सकिन्छ र धेरै मानिसहरूले अनुभव गर्दछन् कि कडा जोडीहरू र दुखेको मांसपेशीहरूमा लक्षण राहत प्रदान गर्दछ।
नि: शुल्क हाम्रो युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) नि: शुल्क व्यायाम सल्लाहहरू, व्यायाम कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य ज्ञानको लागि। तपाईं हुनुपर्दछ परिवारमा स्वागत छ!
फाइब्रोमायाल्जिया र भड्काउने आहार
हामीले यसभन्दा अघि उल्लेख गरिसक्यौं कि सुजनले कसरी फाइब्रोमाइल्जियामा प्रभाव पार्छ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, साथसाथै अन्य गठियाहरू। तपाइँले के खानुपर्दछ र के खानु हुँदैन भन्ने बारेमा थोरै जान्न अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले तल लेखिएको लेखमा फाइब्रोमायाल्जीया डाईटको बारेमा पढ्न र जान्नको लागि।
यो पनि पढ्नुहोस्: Fibromyalgia आहार [ग्रेट डाइट गाईड] को बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा।
Fibromyalgia को व्यापक उपचार
फाइब्रोमायाल्जियाका कारण विभिन्न लक्षण र पीडाको पूरै केस केसिड हुन्छ - र त्यसैले यसको विस्तृत उपचारको आवश्यक पर्दछ। यो पक्कै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि फाइब्रो भएकाहरूमा पेन्किलरहरूको अधिक प्रयोग हुन्छ - र तिनीहरूलाई असर नपरेकाहरूको तुलनामा फिजियोथेरापिष्ट वा क्यारोप्रैक्टरको अधिक अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
धेरै बिरामीहरूले आत्म-उपायहरू र आत्म-उपचार पनि प्रयोग गर्छन् जुन उनीहरू सोच्दछन् कि आफैंका लागि राम्रो काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, कम्प्रेसन समर्थन र ट्रिगर बिन्दु बलमा, तर त्यहाँ धेरै अन्य विकल्प र प्राथमिकताहरू पनि छन्। हामी तपाईंलाई आफ्नो स्थानीय समर्थन समूहमा सामेल हुन सिफारिस गर्दछौं - सम्भवतः तल देखाइएको जस्तै डिजिटल समूहमा सामेल हुनुहोस्।
Aफाइब्रोमायल्जियाको लागि स्व-मद्दत सिफारिस गरियो
हाम्रा धेरै बिरामीहरूले हामीलाई मांसपेशी र जोर्नीहरूमा दुखाइ कम गर्न कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने बारे प्रश्नहरू सोध्छन्। Fibromyalgia र पुरानो दुखाइ सिन्ड्रोमहरूमा, हामी विशेष गरी आराम प्रदान गर्ने उपायहरूमा रुचि राख्छौं। त्यसैले हामी खुसीसाथ सिफारिस गर्दछौं तातो पानी पोखरी मा प्रशिक्षण, योग र ध्यान, साथै दैनिक प्रयोग एक्युप्रेशर चटाई (ट्रिगर बिन्दु चटाई)
सुझाव: एक्यूप्रेशर चटाई (लिङ्क नयाँ विन्डोमा खुल्छ)
यो पुरानो मांसपेशी तनाव बाट ग्रस्त तपाईं को लागि एक उत्कृष्ट आत्म-मापन हुन सक्छ। हामीले यहाँ लिङ्क गर्ने यो एक्यूप्रेशर चटाई पनि छुट्टै हेडरेस्टको साथ आउँदछ जसले घाँटीका मांसपेशीहरूमा पुग्न सजिलो बनाउँछ। छवि वा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ यसको बारेमा थप पढ्न, साथै किनमेल अवसरहरू हेर्न। हामी 20 र 40 मिनेट बीचको दैनिक सत्र सिफारिस गर्दछौं।
बाथ र पुरानो दुखाइको लागि अन्य आत्म-उपायहरू
सङ्कुचन शोर (जस्तै कम्प्रेसन मोजे जसले घाउ मांसपेशिहरुमा रक्त संचार बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ वा विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन ग्लोभहरू og मोजा हात र खुट्टामा गठिया सम्बन्धी लक्षणहरूका बिरूद्ध)
खुट्टाका औंलाहरू (गठियाका विभिन्न प्रकारहरूले बnt्गको औंलाहरू निम्त्याउन सक्छ - उदाहरणका लागि हथौड़ाको औंलाहरू वा हलिक्स भल्गस (ठूलो पछाडिको औंला घुम्न) - औंला खींचनेहरूले यीलाई राहत दिन मद्दत गर्न सक्छ)
आर्निका क्रीम वा तातो कन्डिसनर (पीडा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ)
फाइब्रोमायाल्जिया समर्थन समूह
फेसबुक समूहमा शामिल हुनुहोस् «संधिवात र दीर्घकालीन पीडा - नर्वे: अनुसन्धान र समाचार» (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) वायमेटिक र क्रोनिक डिसअर्डरहरूको बारेमा अनुसन्धान र मिडिया लेख्ने पछिल्लो अपडेटहरूको लागि। यहाँ, सदस्यहरूले पनि मद्दत र समर्थन लिन सक्दछन् - दिनको सबै समयमा - आफ्नै अनुभवहरू र सल्लाहहरू साझेदारी गरेर।
साझा र्यूमेटिज्मका साथ समर्थन गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्
हामी तपाईंलाई दयालु साथ यो लेख सोशल मिडिया मा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न आग्रह गर्दछौं(हाम्रो लेख वा वेबसाइट vondt.net मा सीधा लिंक गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्)। हामी सान्दर्भिक वेबसाइटहरूसँग लि exchange्कहरू पनि आदानप्रदान गर्दछौं (फेसबुक मार्फत हामीलाई सन्देश मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लगको साथ लिंक परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने)। समझ, सामान्य ज्ञान र बढेको फोकस दीर्घकालीन पीडा निदानको लागी राम्रो दैनिक जीवनको लागि पहिलो कदम हो।
स्रोत: Pubmed (पाठमा आफ्नै स्रोतहरू हेर्नुहोस्)
फाइब्रोमायाल्जिया कम निद्राको रातमा कडा रूपमा जोडिएको छ। यहाँ हामी तपाईंलाई9सुझावहरू दिन्छौं जसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछन्।
तपाईं अन्तिम रात राम्रो सुत्नुभयो? फाइब्रोमाइल्जियाका धेरै व्यक्तिहरू निन्द्राबाट ग्रस्त छन्। एक तथ्य जुन दैनिक जीवनमा बढ्दो दुखाई र कम उर्जासँग पनि जोडिएको छ।
यस लेखमा, हामी राम्रो निद्राका लागि tips सल्लाहहरूमा ध्यान दिन्छौं - अमेरिकाको फिलाडेल्फियाको प्रख्यात जेफरसन हेल्थ स्लीप डिसअर्डर सेन्टरले दिएको छ। एक वास्तवमा यति टाढा जान सक्छ कि विघ्न रातको निद्रा फाइब्रोमाइल्जियाको मुख्य लक्षणहरू मध्ये एक हो - र भावना यो हो कि कोही एक घण्टा सम्म ओछ्यानमा सुते पनि सधैं थकित हुन्छ। धेरै शोध अध्ययनहरूले यो पुष्टि गरेको छ। तिनीहरूले औंल्याए कि फाइब्रोमाइल्जियाबाट पीडित व्यक्तिहरू सामान्यतया गहिरो निन्द्राको पर्याप्त मात्रामा पाउँदैनन् - जसलाई वैज्ञानिक हिसाबले अल्फा तरंग विकारहरू भनिन्छ। यी दिमागका तरंगहरू निद्राको गहिरा तहहरूबाट प्रत्यक्ष ब्यूँझनसँग सम्बन्धित छन्।
- Fibromyalgia मा थकान र थकान लागि द्रुत सुझाव
हामीलाई थाहा छ कि फाइब्रोमायल्जिया भएका धेरै व्यक्तिहरूले धेरै कारकहरूको कारणले निद्राको गुणस्तर घटाएको छ। यी कारकहरू मध्ये एक प्रायः उच्च मांसपेशी तनाव र रातमा दुखाइ हो। हाम्रा धेरै रोगीहरूले हामीलाई राम्रो रातको निद्राको लागि राम्रो सल्लाह छ कि भनेर सोध्छन् - जसमध्ये केही तलको लेखमा तपाइँ अझ राम्रोसँग परिचित हुनुहुनेछ - तर हामी सुत्नु अघि आरामको महत्त्वलाई पनि जोड दिन चाहन्छौं। एक राम्रो विश्राम उपकरण हामी अक्सर सिफारिस गर्छौं एक्युप्रेशर चटाई मांसपेशी तनाव विरुद्ध प्रयोगको लागि (यहाँ एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् - लिङ्क नयाँ विन्डोमा खुल्छ)। तपाईं सुत्नु अघि लगभग 1 घण्टाको लागि चटाई प्रयोग गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् - र 20-30 मिनेटको विश्राम सत्र लिनुहोस्। उद्देश्य सुत्ने समय अघि आफ्नो मांसपेशी र शरीर मा गतिविधि कम गर्न छ।
(तस्बिर: एक्यूप्रेशर चटाई एक राम्रो आराम उपकरण हुन सक्छ)
Fibromyalgia र निद्रा
Fibromyalgia ले पुरानो दुखाइ र अन्य धेरै लक्षणहरू समावेश गर्दछ - जस्तै निद्रा समस्या र चिडचिडा आंत्र सिन्ड्रोम। यो देख्न सकिन्छ कि निद्रा समस्याहरू यो रोगी समूहमा नर्वेजियन जनसंख्याको बाँकी भन्दा बढी सामान्य छन्। दुर्भाग्यवश, निद्राको अभावले पूर्व-अवस्थित लक्षणहरूलाई बढाउँछ र अवस्थालाई अझ खराब बनाउँछ।
यो ठिक हो किन राम्रो सल्लाह र सल्लाह जान्नको लागि आवश्यक छ र राम्रो निद्राको स्वास्थ्य प्राप्त गर्न। हामी आशा गर्दछौं कि यी9मध्ये केही सुझावहरूले तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछन्।
१. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कोठा पूरै अँध्यारो छ
फाइब्रोमायाल्जिया प्राय: आवाज र प्रकाशको लागि बढ्दो संवेदनशीलतामा पुर्‍याउँछ। त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं सुत्ने कोठामा कुनै पनि प्रकाश स्रोतहरू छैनन्। यसले ओभरएक्टिभ मोबाइलहरू पनि समावेश गर्दछ जुन प्रत्येक पटक कसैले तपाईंको नयाँ फोटोमा टिप्पणी गर्दा उज्यालो हुन्छ। धेरैले यो पनि बिर्सन्छन् कि साना प्रकाश स्रोतहरूले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारण, "ब्लाइन्डआउटहरू" प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जसले प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्छ - र तपाईंको कोठामा पनि साना प्रकाश स्रोतहरू कभर गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
२. सुत्नेभन्दा अघि आन्दोलन अभ्यास
लामो दिन पछि, मांसपेशीहरु तनावग्रस्त गितारको तार जस्तै महसुस गर्न सक्छ।त्यसैले सुत्ने समय अघि गर्न सक्ने आरामदायी व्यायामको लागि राम्रो दिनचर्या हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको भिडियोमा तपाइँले विकास गरेको अभ्यास सहितको कार्यक्रम छ Chiropractor अलेक्ज्याण्डर Andorff। त्यसैले यी अभ्यासहरूले तपाईंलाई सुत्नुअघि मांसपेशी र जोर्नीहरू खुकुलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ, र दिनहुँ गर्न सकिन्छ। तपाईंले विश्राम सत्र लिनु अघि तिनीहरूलाई गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् एक्यूप्रेशर मैट (लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ)।
Night. राती कृत्रिम प्रकाश स्रोतहरू बेवास्ता गर्नुहोस्
निद्रा चिकित्सक (डा। डोघारामिजी) पनि भन्छन् कि रातमा मोबाइल, टेलिभिजन र चम्किला बत्तीको प्रयोग सीमित गर्नुपर्दछ। प्रकाशले शरीरमा मेलाटोनिनको स्तर घटाएर प्राकृतिक सर्काडियन लयलाई बाधा पुर्‍याउँछ। तसर्थ, सुत्ने समय भन्दा केही घण्टा अघि प्रकाशलाई मधुरो गर्न सिफारिस गरिन्छ। यी सुझावहरू पछ्याउन हाम्रो उमेरमा गाह्रो हुन सक्छ, तर यसले तपाईंलाई राम्रो निद्रा स्वास्थ्य पनि दिन सक्छ - जसले दैनिक जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्छ। एक दिनचर्या संग सुरु गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् - र त्यसपछि बिस्तारै आफैलाई निर्माण गर्नुहोस्। हामी सबै सुझावहरू एकैचोटि जान सिफारिस गर्दैनौं, किनकि यसले लामो समयसम्म सम्बन्धित हुन गाह्रो बनाउन सक्छ। आफ्नो लक्ष्य संग यथार्थवादी हुनुहोस्।
Each. एकै दिनमा प्रत्येक दिनमा उठ्नुहोस्
यस ठाउँमा, निन्द्रा डाक्टर विशेष गरी चिन्तित छन् कि तपाइँ हरेक दिन लगभग उही समयमा उठ्नुहुन्छ - सप्ताहन्त र छुट्टिहरूमा समावेश गर्दै। अचम्मको कुरा, उहाँ यति कडा छैन कि तपाइँ हरेक रात एकै समयमा ओछ्यानमा जानु पर्छ, तर यो पनि सिफारिस गरिएको छ। उनी भन्छन् कि शरीर मुख्यतया 24 घण्टाको सर्काडियन लयको सम्बन्धमा जब तपाईं उठ्नुहुन्छ त्यससँग सम्बन्धित छ। त्यसोभए सामान्य भन्दा तीन घण्टा ढिलो उठ्दा पनि तपाईंको शरीरमा परिवर्तन भएको सर्काडियन लय हुन्छ जसले तपाईंलाई राम्रोसँग निदाउन गाह्रो बनाउन सक्छ।
Bed. सुत्न भन्दा पहिले आराम गर्नुहोस्
हामी मध्ये धेरै टिभी र सोफेको साथ आराम गरीरहेका छौं। निस्सन्देह, टिभी हेर्नु र त्यसमा रमाइलो गर्नु राम्रो हो, तर यो सुत्ने बेला हुनु अघि तपाईंले पछिल्लो चीज गर्नुहुन्न। चिकित्सा विशेषज्ञले तपाईंलाई फुर्सदमा साँझको पैदल यात्रा गर्न, राम्रो किताब पढ्न, मनन गर्ने र आरामदायी संगीत सुन्ने सल्लाह दिन्छन् - मांसपेशीहरूलाई आराम दिनको लागि तातो नुहाउने वा नुहाउनु पर्छ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले नयाँ दिनचर्याहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन शरीरले सुत्ने समयसँग सम्बद्ध हुन सक्छ (संकेत: यहाँ हामी तपाईंलाई साँझको सत्रमा हाम्रो सुझावको सम्झना गराउँछौं। एक्यूप्रेशर मैट सुत्नु अघि आराम को लागी)।
Make. यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग राम्रो ओछ्यान र उचित तकिया छ
एक राम्रो ओछ्यान र गद्दा हो, राम्रो रातको निद्राका लागि दुई मुख्य घटकहरू। गद्दा, तकिया र ओछ्यान को गुणस्तर मा ठूलो भिन्नता छन्, तर दुर्भाग्यवश यो पनि एक धेरै महँगो लगानी हो। ओछ्यान र गद्दा किन्नको लागि के गाह्रो छ कि राम्रो ओछ्यान के गठन गर्ने कुनै विश्वव्यापी समाधान छैन। हामी सबै फरक छौँ, विभिन्न शरीरको आकार र तौलका साथ, जसको मतलब यो दुविधाको विभिन्न समाधानहरू पनि छन्। हामी दृढताका साथ सिफारिस गर्छौं कि तपाईं गद्दा र ओछ्यानहरू बेच्ने स्टोरमा जानुहोस् - र यसरी तिनीहरूलाई यहाँ परीक्षण गराउनुहोस्।
तकिया शुरुमा बढी सस्तो लगानी हुन सक्छ - धेरैले सिफारिस गर्छन् यू-आकारको घाँटी तकिया, तर स्वाद सधैं उस्तै हुँदैन, त्यसैले तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाइँ यसलाई केहि समयको लागि प्रयास गर्नुभएन। अरूले हामीले बोलाउने कुरामा राम्रो प्रभाव पारेको महसुस गर्छन् श्रोणि प्याड (तल चित्र हेर्नुहोस्)। को उद्देश्य ए पेल्विक फ्लोर तकिया श्रोणि र पछाडिको लागि थप सही एर्गोनोमिक सुत्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न हो।
(को बारेमा थप पढ्नको लागि माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस् पेल्विक फ्लोर - र खरीद अवसरहरू हेर्नुहोस्)
A. निद्रा अध्ययनलाई विचार गर्नुहोस्
यदि तपाईं लामो समयको लागि कमजोर निन्द्राको साथ ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो जीपीबाट निद्रा अध्ययनको लागि रेफरल लिने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। यो विशेष गरी सान्दर्भिक छ यदि तपाईं राती नियमित रूपमा ब्यूँझनुहुन्छ, दिनको समयमा निद्रा लाग्नुहुन्छ, निद्राको माध्यमबाट धेरै हिँडडुल गर्नुहुन्छ, साथै घुर्ने। त्यस्ता निद्रा अध्ययनहरूले, निश्चित अवस्थामा, महत्त्वपूर्ण कारणहरू प्रकट गर्न सक्छ - जस्तै निद्रा एपनिया। स्लीप एपनियाको लागि राम्रो समाधानहरू छन् जस्तै cpap मेसिन।
Ove. अचाक्ली खाने नगर्नुहोस्
सुत्नु भन्दा अलि धेरै नै खाना पचाउँदा पाचन प्रणालीमा बढ्ने गतिविधि हुन सक्छ। जब हामी फाइब्रोमायल्जियाको साथमा हामी प्रायः आन्द्राको समस्याबाट चिन्तित हुन्छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्छौं, र यसरी पेटको एसिड पनि बढ्छ, सुत्ने समय अघि फ्याटी र भडकाउने खानाहरू त्याग्न महत्त्वपूर्ण छ। तर सामान्य रूपमा पनि। राम्रो फाइब्रोमायल्जिया आहार पनि राम्रो निद्राको कुञ्जी हो। यदि तपाइँ सोचिरहनु भएको छ कि वात रोग विशेषज्ञहरु को लागी राम्रो आहार के हुन सक्छ, त्यसपछि तपाइँ यसको बारे थप पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
Al। रक्सीलाई काट्नुहोस् र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी खाउनुहोस्
रक्सी अलमल्याउने निद्राको सबल स्रोत हो। तथापि, निराशाले हताश समाधानहरू निम्त्याउन सक्छ - जुन वास्तवमा सिफारिस गरिएको छैन। हामीले धेरैको बारेमा सुनेका छौं, दुर्भाग्यवश, जसले सुत्नु अघि धेरै गिलास वाइन वा बियर लिन्छन्, राम्रो रातको निद्राको आशामा। तपाईंले यो सबै तरिकाबाट जोगिनै पर्छ। रक्सी अत्यधिक भडकाउने हो र यसले शरीरमा दुखाइ बढाउँछ, साथसाथै लत पनि हुन्छ। एन्टि-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू भएका प्राकृतिक पूरकहरूको उदाहरणहरू समावेश छन् बेसार og bilberry निकाल्ने.
जेफरसन स्वास्थ्य निद्रा विकार केन्द्र र राष्ट्रिय दर्द रिपोर्ट।
फाइब्रोमायाल्जिया र व्यायाम
के तपाईंलाई थाहा छ कि rheumatologists को लागि अनुकूलित प्रशिक्षण एक विरोधी भ्रामक प्रभाव हुन सक्छ? हामीसँग एउटा Youtube च्यानल छ जसलाई हामी तपाईंलाई सदस्यता लिन सिफारिस गर्छौं - किनकि हामीलाई थाहा छ कि बाथ रोगसँग व्यायाम गर्न सजिलो छैन। तर एकै समयमा, यो हार नमान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ6कोमल बल अभ्यासको साथ एक सुझाव छ जुन प्रयास गर्न लायक हुन सक्छ:
नि: शुल्क हाम्रो युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
हामीलाई थाहा छ कि फाइब्रोमायाल्जिया र अन्य वायमेटिक डिसअर्डरहरूमा भडकाउने प्रतिक्रियाहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन्। चिनी र रक्सी जस्ता धेरै भड्काउने खाना त्याग्नु आवश्यक छ। तपाईं तलको लेखमा फाइब्रोमाइल्जिया खानाको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
फाइब्रोमायाल्जियाका कारण विभिन्न लक्षण र पीडाको पूरै केस केसिड हुन्छ - र त्यसैले यसको विस्तृत उपचारको आवश्यक पर्दछ। निस्सन्देह, यो अचम्मको कुरा होइन कि फाइब्रो भएकाहरूले दुखाइ निवारकहरूको उच्च प्रयोग गर्छन् - र उनीहरूलाई फिजियोथेरापिस्ट वा काइरोप्र्याक्टरसँग बढी फलोअप चाहिन्छ जो प्रभावित छैनन्। धेरै रोगीहरूले आत्म-उपचार र आत्म-उपचार पनि प्रयोग गर्छन् जुन उनीहरूलाई लाग्छ कि तिनीहरूले आफैंको लागि राम्रो काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, कम्प्रेसन समर्थन गर्दछ र बिन्दु बल ट्रिगर गर्दछ, तर त्यहाँ धेरै अन्य विकल्प र प्राथमिकताहरू पनि छन्। हामी तपाईंलाई आफ्नो स्थानीय समर्थन समूहमा सामेल हुन सिफारिस गर्दछौं - सम्भवतः तल देखाइएको जस्तै डिजिटल समूहमा सामेल हुनुहोस्।
आर्निका क्रीम वा तातो कन्डिसनर (केही मा मांसपेशी दुखाइ कम गर्न सक्छ)
हामी पुरानो दुखाइ निदान र बाथ दुखाइ को लागी आधुनिक मूल्याङ्कन, उपचार र पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं।
हामी तपाईंलाई दयालु साथ यो लेख सोशल मिडिया मा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न आग्रह गर्दछौं (कृपया लेखमा सिधा लिंक गर्नुहोस्)। हामी सान्दर्भिक वेबसाइटहरूसँग लि exchange्कहरू पनि आदानप्रदान गर्दछौं (फेसबुकमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटसँग लिंक परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने)। समझ, सामान्य ज्ञान र बढेको फोकस दीर्घकालीन पीडा निदानको लागी राम्रो दैनिक जीवनको लागि पहिलो कदम हो।
विकल्प A: FB मा सिधा साझेदारी गर्नुहोस् - वेबसाइट ठेगानाको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र तपाईंको फेसबुक पृष्ठमा वा तपाईंको फेसबुक सदस्य समूहमा प्रासंगिक फेसबुक ग्रुपमा टाँस्नुहोस्। वा तलको "SHARE" बटन थिच्नुहोस् तपाईको फेसबुकमा पोष्ट साझेदारी गर्नका लागि।
विकल्प C: अनुसरण गर्नुहोस् र बराबर हाम्रो फेसबुक पृष्ठ (यहाँ क्लिक गरीन्छ भने) र हाम्रो YouTube च्यानल (थप नि: शुल्क भिडियोहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!)
१० को पृष्ठ १<1234>»